Mveliso kunye nabenzi Umntu weqhwa
Umkhenkce ocekethekileyo uthambile kwaye unamakhemikhali amancinci omkhenkce apholisa iintlanzi ngokukhawuleza kwaye azigcine zintsha. Ngokudibeneyo nenkqubo yokuhambisa, umkhenkce olulatyayo upompwa ngokulula kwiindawo ezininzi.
Oluludaka Umatshini ice yenzelwe ubomi obude kunye nokugcinwa ephantsi. Ukusuka kumaphenyane okuloba ukuya elunxwemeni, sinobutyebi bamava kunye nezisombululo.
Umatshini we-slurry ice unokuma kulwandle oluninzi emhlabeni, ngamandla e-brine aqala kwi-0.25% ukuya kwi-3.5%. Okwangoku, iimveliso zethu zesakhiwo esihambelana, sisebenza njengokhetho olufanelekileyo kwisithuba esincinci njengekhabhathi. Okwangoku, iimveliso zethu zisetyenziswa ngokubanzi kushishino lokuloba, ukwenziwa kwenyama, ukuthengiswa kwivenkile, iziqhamo kunye nokugcinwa kwemifuno, ukucocwa kwemibhobho neminye imimandla.
1. Umenzi weqhwa obiyelwe ngasemva, obonelela ngombono olungileyo kunye nohlengahlengiso olulula, ukucoca kunye nokugcina.
2. Ubomi benkonzo ende ngokukhuselekileyo nokuthembeka. Oluludaka Umatshini ice yenzelwe kwaye yenziwa ngokungqinelana umgangatho isitya xi. Ngeli xesha iinxalenye zayo zenziwe ngentsimbi enganyangekiyo enokumelana nomhlwa kwaye iphaneli yokulawula yenziwa ngokungqongqo ngokomgangatho wombane waselwandle.
3. Iziphumo eziphezulu kunye nokonga umbane. Xa kuthelekiswa neemveliso ezifanayo kwintengiso, uyilo lomenzi wethu womkhenkce olulungileyo lusengqiqweni, ukubonelela ngendawo enkulu yokuba ngumphunga inkulu kwaye iphezulu iqondo lobushushu bomphunga.
4. Iinkcukacha ezahlukeneyo ziyafumaneka. Iimveliso zethu zizenzekelayo kwaye sinokubonelela ngezisombululo ezenziwe ngokwezifiso ngokweendawo ezahlukeneyo kunye nokusetyenziswa.
Isikhenkcisi somthamo: 2374kCal-284,820kCal
Ukunikezelwa kwamandla: ukunikezelwa kwamandla okuqhelekileyo
Iimeko zokusebenza Standard: ubushushu unikezelo lwamanzi 16 ℃, ubushushu kokugquma 33 ℃
Iimeko esebenzayo: ubushushu unikezelo lwamanzi 0 ~ 35 ℃, lobushushu kokugquma 5 ~ 40 ℃
I-Slurry Ice Show
Egqithileyo Plate Ice Machine
Okulandelayo: Umchiza waManzi oQinisekisiweyo
Ice oluludaka Machine
Oluludaka Ice Machine India
Ifilimu ewayo Uhlobo lweChiller yaManzi